Izifundo ezingama-30 zeJava zasimahla kwi-Intanethi ezineSatifikethi sokuGqibela 2022
Aprili 2, 2022 Daniel Okeke
Izifundo ezingama-30 zasimahla zeJava ezikwi-Intanethi ezineSatifikethi sokuGqibela
Isidingo sokufunda ukwenza inkqubo asikaze sibe ngaphezu koko kufunekayo, kwezi khosi zingama-30 zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa, uya kufumana isandla sakho kuqeqesho oluninzi ukusuka kwabaqalayo ukuya kwabaphakathi ukuya phambili.
Ngapha koko, i-COVID-19 yenze iinkampani ezininzi, ndithetha malunga neepesenti ezingama-80 zeenkampani zehlabathi, zinezicwangciso zokuzenzela iinkqubo zabo zokusebenza. Awuzenzi izinto ezinje ngaphandle komdwelisi, ogcweleyo ikhosi yomphuhlisi westaki yenye yezona ndawo zingcono ukuqala.
Kwaye njengoko ezi nkampani zizenzela amashishini abo, kukwakho ukonyuka kwezoyikiso ze-cyber kunye nolwaphulo-mthetho, izifundo free ethical hacking inokukunceda ukukhusela ezi nkampani kubaphuli-mthetho be-intanethi. Ukuthatha ikhosi yeJava okanye ukuyiphucula kunokonyusa ikhondo lakho lomsebenzi.
Ukuba uyifunde kakuhle, uya kuchaza amatyala akho kwaye aya kuhlawulwa nge "Enkosi" umyalezo. Izifundo zekhompyuter ezikwi-Intanethi zikwasesinye isakhono sokubamba ukuze ube nobuchule kwihlabathi lenkqubo.
Iingenelo zokufunda iJAVA
Umjikelo wonke Popular
Ezinye iiLwimi zokuSebenza
Iimfuno zokuthatha iikhosi zejava zasimahla kwi-intanethi
Iikhosi zeJava zasimahla kwi-Intanethi kunye neSatifikethi sokuGqibela
IiKhosi zeJava zasimahla kwi-Intanethi ezineSatifikethi sokuGqibela kwabaQalayo
1. Inkqubo yeJava yokuSebenza kunye neNkqubo yoBunjineli boBunjineli
2. INkqubo eJoliswe kwiNjongo kwiNgcaciso yeJava
3. Inkqubo yeJava – iSifundo esihle kakhulu
4. Ikhosi ye-Java ekwi-Intanethi yasimahla – EDUCBA
5. INkqubo yeJava yasimahla kwi-Intanethi yabaQalayo kwiKhosi | UAlison
6. Isifundo seJava sabaQalayo abaGqibeleleyo (Udemy)
8. Imigaqo yeNkqubo yeJava
9. Isingeniso kwiNkqubo yeJava: Ukuqala kwikhowudi kwiJava
10. I-Java Programming Basics | Ubumdaka
Iikhosi zeJava zasimahla kwi-Intanethi kunye neSatifikethi sokuGqibela esiPhakathi
11. INkqubo yeJava eSekelwe kwiNjongo: Ulwakhiwo lweDatha kunye naNgaphaya koBuchwepheshe
12. Ubungcali beJava obungundoqo
13. Ii-algorithms, iCandelo I
14. INkqubo eJongene neNjongo kwiJava
16. UPhuculo lweNtsebenzo yeWebhusayithi
18. IProjekthi yoPhuhliso lweSitaphu esipheleleyo
20. INkqubo eJongene neNjongo kwiJava
Izifundo zasimahla zeJava ezikwi-Intanethi zaBafundi abaPhezulu
21. I-Computer Architecture
22. I-IBM AI Enterprise Workflow Specialization (Eyaphambili)
23. I-Command Line Interface (CLI) Nge-Golang Ukusuka kwi-Infosys (ePhezulu)
24. Ilitye eliyiNtloko le-Cybersecurity (Ngaphambili)
25. UkuFunda koMatshini weQuantum
26. I-Computer Forensics
27. IGradle ye-Android kunye neJava
29. UBonelelo lweSikhangeli
IiKhosi zeJava zasimahla kwi-Intanethi ezineSatifikethi sokuGqibela-ii-FAQs
Ndingayifunda phi iJava simahla?
Ndingenza ntoni ngolwazi lweJAVA?
Ngaba isiqinisekiso seJava sinzima?
Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana isiqinisekiso seJava?
Ingaba isiqinisekiso seJava sixabisa malini?
Ndingayenza njani isiqinisekiso seJava?
IJava lulwimi lwenkqubo olujolise kwinto, esekwe kwiklasi, iqonga elinqamlezayo, kunye nenjongo ngokubanzi. Njengoko abanye becinga, "ingaba iJava sisishunqulelo?" Hayi, iJava ayisiyo-akhronimi.
Ngo-1995, uJames Gosling wenza iJava ngenjongo yomdlalo kamabonakude. Kodwa yayihambele phambili kakhulu ngelo xesha, kamva, yaqhubela phambili ukuba isetyenziselwe ulwimi lwenkqubo yewebhu.
Kwezi zifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa, uya kubona ukusetyenziswa kwezi STAPLES zimbini.
Yintoni ebaluleke ngaphezu koko? Kufuneka wenze imali ngokufunda olu lwimi lunzima. Ewe, iJava okanye naluphi na uhlobo lwenkqubo alulula, yiyo loo nto umndilili weprogram yeJava e-US efumana ngaphezulu kwe-95,000 yeedola.
Ungajoyina olu didi, konke okufuneka ukwenze kukuzithatha ngenkuthalo ezi khosi zejava zasimahla kwi-intanethi kunye nesatifikethi sokugqitywa. Ukuba useza kuqalisa, ikhosi yabaqalayo iya kuba ngcono, ukuba uqokelele izakhono ezithile kwaye ufuna ukuphucula, yiya ngqo phambili uye kuPhakathi.
Ungaya kwikhosi ephambili ukuba ufuna ukugqwesa kwezinye iindawo. Ungade uhambe uzifumanele ikhosi ehlawulwayo, okanye uqeshe umqeqeshi wobuqu, konke kuxhomekeke kwindlela ofunda ngayo. Kodwa sinikeze zonke ezona zifundo zibalaseleyo zasimahla onokuzifumana kwi-Intanethi.
IJava lolona lwimi lweNkqubo olusetyenziswa kwihlabathi liphela. Ngapha koko, u-Oracle uthe izixhobo ezibhiliyoni ezi-3 zisebenza kwiJava.
Ngokufunda enye yezi zifundo ze-java zasimahla kwi-intanethi kunye nesatifikethi sokugqitywa uya kuboniswa kwezinye iiLwimi zokuCwangcisa ezinje ngeC, kunye neC ++.
IJava ikhona iminyaka eyi-27, ngoko ke nayiphi na ingxaki oya kudibana nayo, idibene nabanye abantu abaninzi kwaye isisombululo silapha kanye kwiwebhu.
Akukho sidanga sikhethekileyo sokuthatha inxaxheba kwezi khosi ze-java zasimahla ze-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa, konke okudingayo.
Kuya kufuneka ukwazi ukusebenzisa ikhompyuter
Kuya kufuneka ube nekhompyuter kwisifundo
Ukuba umtsha, qala ngekhosi yabaqalayo.
Ukufikelela kwi-intanethi okulungileyo
Indawo yokufunda entle
Nalu uluhlu lwezifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa
Inkqubo yeJava kunye neNkqubo yoBunjineli beSoftware
Inkqubo-ejolise kuKhangela kuKhethekileyo kwiJava
Inkqubo yeJava-iSifundo esihle kakhulu
Ikhosi yeJava ekwi-Intanethi yasimahla-EDUCBA
Inkqubo yeJava yasimahla kwiKhosi yabaQalayo | UAlison
Isifundo seJava sabaQalayo abaGqibeleleyo (Udemy)
IJava Programming Basics
Intshayelelo kwiNkqubo yeJava: Ukuqala kwikhowudi kwiJava
Java Programming Basics | Ubumdaka
INkqubo yeJava eJoliswe kwiNjongo: Ubume beDatha kunye naNgaphaya koBuchwepheshe
Ubungcali obungundoqo kwiJava
I-Algorithms, Icandelo I
Inkqubo ejolise kwinto kwiJava
ULungiselelo lokuSebenza kweWebhusayithi
Iprojekthi yoPhuhliso lweSitaki esipheleleyo
I-IBM AI Enterprise Workflow Specialization
Unxibelelwano Lomgca Womyalelo (CLI) NgeGolang Ukusuka kwi-Infosys
UkuFunda komatshini weQuantum
IGradle ye-Android kunye neJava
Esi sesinye sezifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa ezibonelelwa yiYunivesithi yaseDuke ngeCoursera. Yikhosi yenqanaba labaqalayo eqhubayo iinyanga 5, nangaphezulu Abafundi be251,000 sele bebhalisile.
Iza kukwazisa kwi-java kwaye iya kukunceda ngokuqonda kwenkqubo ebalulekileyo kwaye uya kuqalisa ukubhala iinkqubo ezinokusetyenziswa ukusombulula iingxaki. Uya kuba nezakhono ezisisiseko ezisetyenziswa yinjineli yesoftware ukusombulula iingxaki ezintsonkothileyo zehlabathi, nokuba kukuyila ii-algorithms okanye iinkqubo zokulungisa ingxaki.
Kwimodyuli yokugqibela, uya kufunda "Inkqubo yeJava: Yakha iNkqubo yeeNgcebiso." Okokugqibela, uya kuthatha uvavanyo olukunika ukufikelela kwisatifikethi esiya kufuna imali ethile ukusifumana.
Esi sesinye sezifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa ezibonelelwa yiYunivesithi yaseDuke ngeCoursera, apho ngaphezulu. Abafundi be78,500 babhalisile. Ikwayikhosi yabaqalayo kwaye iyabaleka iinyanga 5.
Le khosi iya nzulu ukukunceda ukuba ufunde indlela yokusombulula iingxaki ezinzima ngakumbi ngoyilo oluchasene neJava. Ngaphaya koko, uyakufumana ulwazi oluluqilima lweendawo ezi-2 zoPhuhliso lweJava; Bluej kunye ne-Eclipse.
Esi sesinye sezifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa esineemodyuli ezi-4 ezinkulu. Abahlohli bakho bangoonjingalwazi kunye nabahlohli kwiNzululwazi yeKhompyutha kunye nobuNjineli beKhompyutha.
Ke uya kufunda kwabo bangafundisi inkqubo kuphela, bayaziqhelanisa kwaye bayisebenzise.
Le yikhosi yabaqalayo yokucwangcisa eyenziwe ngokuFunda okuKhulu kwaye iqhutyelwa iiyure 2 kwaye inovavanyo lokuvavanya ulwazi lwakho kwikhosi. Engaphezulu kwe Abafundi be262,000 sele bebhalisile kuyo yaye abanye baseza kuza.
Ikhosi iya kuqala ngokukufundisa iziseko zolwimi lweJava kunye nokufaka isoftware oza kuyisebenzisa ngexesha lesifundo. Esi sesinye sezifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa esichaza intsingiselo enzulu yeJava.
Ukongeza, uya kufunda iNkqubo yakho yokuqala yeJava, ezinye izinto eziguquguqukayo kunye neentlobo zedatha kwiJava, abasebenzi kwiJava, njl.njl. Uya kunikwa isatifikethi emva kokugqiba ikhosi.
Esi sesinye sezifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa ezithatha ngaphezulu iiyure 4 ukugqiba. Yadalwa ngu-EDUCBA kwaye uya kuba nokufikelela ubomi bonke xa ubhalisa.
Uya kufunda iJava Programming ukusuka ekuqaleni, oko kukuthi, awudingi naluphi na ulwazi olusisiseko lwalo naluphi na ulwimi lokuprograma ukuze uthathe inxaxheba kule khosi. Uya kufunda kwi-JDK yamva nje (i-Java Development Kit) 8, uya kufunda ukuyifaka, ukuyisebenzisa, kunye nendlela yokusebenzisa i-JRE (i-Java Runtime Environment).
Kukho iimodyuli ezi-5 kule khosi egxininisa kwizinto ezijoliswe kwizinto kunye neziseko zeprogram esebenzayo. Esi sifundo sikwakunika ukufikelela kwisatifikethi esinokuqinisekiswa onokuthi usipapashe kwi-intanethi mhlawumbi kwi-LinkedIn.
Le yenye yezifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa esiya kukufundisa eyona nto isisiseko yeNkqubo yeJava. Yapapashwa yiClayDesk E-Learning nge-Alison, kwaye isebenza 3 kwiiyure ze-4.
Phantse Abafundi be36,000 sele ufake isicelo kwikhosi. Ikhosi ingena nzulu ukuchaza iikhonsepthi eziphambili zeJava kunye nezakhono ezilula zokucwangcisa.
IJava iziphatha njengoLwimi lweNkqubo yeC ++ kodwa kulula ukuyisebenzisa, ngenxa yoko akufuneki udikwe yikhosi. Iyakuthatha inyathelo ngexesha, de ufunde ukufomatha imitya kwiJava.
Ikhosi kuqala iqala ngokukwazisa kwiJava kunye neekhonsepthi zayo, emva koko iya kukufundisa ukubhala iiNkqubo zeJava ezisisiseko. Uya kufunda kwakhona iiArrays kwiJava kunye neminye imisebenzi ebalulekileyo yeJava.
Kwimodyuli yokugqibela, uya kwenza iiprojekthi ezithile, emva koko uthathe uvavanyo lwakho lokugqibela olukunika ukufikelela kwisatifikethi sakho. Udinga amanqaku okupasa angama-80% ukuze ulungele ukufumana isatifikethi. Nangona kunjalo, isatifikethi asisimahla.
Esi sesinye sezifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa malunga Izigidi ezili-1.7 zabafundi ubhalisile. Iyabaleka Iiyure ezingama-16 7 imiz, oko kukuthi, inyanga ye-1 yeklasi (iiyure ezi-4 ngeveki).
Yapapashwa nguJohn Purcell, umqeqeshi wophuhliso lwesoftware. Ikhosi inamacandelo ali-9 aneentetho ezingama-74 ezinokukufundisa konke okufuneka ukwazi ngeJava.
Uya kufunda ukuba yintoni iJava kwaye isebenza njani, uyicwangcisa njani iJava engundoqo, njenge "Molo Lizwe," inkqubo. Uya kufunda kwakhona isakhelo sokuqokelelwa kweJava kunye neeklasi ezininzi.
Nangona kunjalo, akuyi kubakho nasiphi na isiqinisekiso sokugqitywa kolu didi lwasimahla, kwaye akuyi kubakho candelo le-Q&A lomqeqeshi, kwaye awukwazi ukuthumela umyalezo kumqeqeshi. Zonke ziyafumaneka kwezinye iikhosi ezihlawulwayo ezivela kuJohn Purcell.
Kodwa yiklasi yeeyure ezili-16 ubude awukwazi ukuyihoya.
Le yenye ikhosi yasimahla eyenziwe nguJohn Purcell. Kwaye iyabaleka malunga 3hrs, kwaye bangaphezulu kwama-259,000 abafundi abafake izicelo.
Iya kukufundisa indlela yokubhala ngokufanelekileyo ikhowudi ye-multi-threading kwiJava, kunye nendlela yokuchonga iingxaki kwi-multi-threading kunye nokuzisombulula. Le khosi ifuna ukuba ube nolwazi olusisiseko lwenkqubo yeJava.
Ukongeza, le yenye yezifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa esinamacandelo ama-2 kunye neentetho ezili-16.
Esi sesinye sezifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa ezibonelelwa yi-Universidad Galileo nge-edx. Ikufundisa indlela yokuqalisa umsebenzi wakho njengomcwangcisi kunye nokusombulula iingxaki zeprogram ngoncedo lwemisebenzi, kunye ne-algorithms ephindaphindayo.
Ikhosi iqhuba iiyure 8-10 eqikelelwa ngeenxa zonke iiveki 5.
Le yenye ikhosi yabaqalayo eyenziwe nge-edx yi-Universidad Carlos III de Madrid. Ngaphezulu 352,000 abafundi sele bebhalisile kuyo kwaye ithatha ukuya kuthi ga iiveki 5 ukugqiba.
Ungayinikezela ngesantya sakho, unokukhetha ukuyithatha kancinci njengoko ukhathalela ezinye izinto ebomini bakho. Okanye ungayigqiba ngeentsuku ezimbalwa, konke kuxhomekeke kuwe.
Le khosi iya kukwazisa kwezinye zeekhonsepthi ezibalulekileyo kucwangciso. Okufana ne-Functional Abstraction, i-Object-Oriented Programming, iParadigm, kunye ne-APIs (i-Application Programming Interfaces).
Abahlohli bakho ngoonjingalwazi, oonjingalwazi abancedisayo, abahlohli, kunye nabaphandi eyunivesithi. Ke unabahlohli abaninzi abalindele ukutyala ulwazi lwabo lweJava kuwe.
Ukuqonda iJava Syntax yeyona nto iphambili yokuqala namphi na umhlohli wenkqubo olungileyo oya kukufundisa, kwaye yile nto iya kuqala ngayo le khosi. Yenye yezifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa esiya kukufundisa ukuba iikhompyuter zethu zizenza njani izigqibo zazo.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, uya kubona indlela amaxwebhu eJava ulwazi ngokusebenzisa izinto eziguquguqukayo kunye neentlobo zedatha. Ngaphaya koko, uya kufunda ukusebenzisa i-Interllij, i-Java IDE (Imeko-bume yoPhuhliso eDityanisiweyo) esetyenziswa ngabacwangcisi benkqubo abanobuchule ukwakha, ukuqulunqa kunye nokususa ikhowudi.
Kuya kufuneka ufunde ezi ngqikelelo zisisiseko phambi kokuba uqhubele phambili ukuze ube ngumdwebi wenkqubo oyingcali. Ikhosi ithatha malunga iiveki 6 ukugqiba kwaye unokuthatyathwa ngesantya sakho.
Sithathe ixesha lethu ukudwelisa iikhosi ze-java zasimahla kwi-intanethi kunye nesatifikethi sokugqitywa kwabaQalayo. Yeyiphi, xa ifundwe ngokufanelekileyo awusoze ubhideke malunga neziseko zeJava Programming.
Ngapha koko, uya kuba neembono zokucwangcisa ngokupheleleyo.
Ngoku, sifuna ukudwelisa ezinye iikhosi zejava zasimahla kwi-intanethi kunye nesatifikethi sokugqitywa onokuthi usifake ukuqhubela phambili isakhono kunye nolwazi lwakho.
Le khosi ihamba ngaphaya kwezinto ezisisiseko ukugubungela izihloko kuphuhliso lwesoftware. Uya kufunda imigaqo ephambili yenkqubo ejolise kwinto, eya kukwenza ukuba uthathe ithuba leJava ngokupheleleyo.
Le yenye yezifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa ezibonelelwa yiYunivesithi yaseCalifornia San Diego nangaphezulu. Abafundi be63,000 babhalisa kuyo.
Sisifundo onokuthi usithathe ngesantya sakho kwaye naphi na emhlabeni. Iyabaleka Iinyanga ezi-7 ezipheleleyo, eyona ingcono ithathwe iiyure ezi-5 ngeveki.
Uya kungena nzulu ukuze ufunde indlela yokusebenzisa inkqubo ejolise kwizinto zokwakha iiklasi kunye nokudala izinto. Esi sesinye sezifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa esichaza ukuba izisombululo zipakishwa njani kwiJava.
Ngaphaya koko, uya kufunda ukuba ulisebenzisa njani ilifa kunye nepolymorphism kwiJava. Kwaye emva kwekhosi, uya kufumana iNkqubo yeKhompyutha, iNkqubo yeJava, uPhuhliso lweWebhu, iCrt0, iJavac, kunye nezakhono ze-Iterator. Kwaye izakhono ezininzi ngakumbi.
Ikhosi ibonelelwa nguFunda Ukufuna ngeCoursera, nangaphezulu 11,000 abafundi baye benza isicelo kuyo. Ungayigqibezela ngaphakathi iinyanga 5, iiyure ezi-4 ngeveki ziya kuba ngcono.
Esi sesinye sezifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa ezibonelelwa yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo emhlabeni, iYunivesithi yasePrinceton ngeCoursera. Ngaphezulu 934,000 abafundi sele isicelo kuyo, kwaye ibaleka emangalisayo iiyure 54.
Ngenxa yokusebenza ngempumelelo kwesi sifundo, i-22% yabafundi abagqibe ikhosi bakwazi ukuqalisa ikhondo elitsha, baze abangama-25% bafumana inzuzo ebonakalayo. Unako nokuphucula eyakho ngokugqiba ikhosi ngenkuthalo.
Ikhosi ineevidiyo ezingama-59 ezinezibonelelo ezininzi ezifundekayo. Emva kwekhosi, uLwakhiwo lweDatha yakho, ii-algorithms, kunye nezakhono zokuCwangcisa iJava ziya kuphucula kakhulu.
Le khosi idalwe ngu-Udacity, eya kukufundisa ezinye zeekhonsepthi ezinamandla kakhulu zeprogram kwiJava, ezifana; Into, iLifa, kunye neeNgqokelela. Uya kufunda ukuba ezi ngqikelelo zisetyenziswa njani kwizicelo ezifuna igalelo lomsebenzisi, kwaye uyakuqala ukuxabisa ukubaluleka kokulawula ezi ngqikelelo kwiJava.
Le khosi iya kuqinisekisa ukuba udala owakho umdlalo ngaphambi kokuba uphele, kwaye uya kufuna ulwazi lwakho olusisiseko lweJava kwesi sifundo. Kufuneka uqonde i-Syntax yeJava, iZiguquguquko, iiNdidi zeDatha, iMisebenzi, kunye neeLops, ukuze usebenzise ngokupheleleyo le khosi.
Ukuba awukagqibi kuzo, iikhosi zethu zasimahla ze-java ezikwi-Intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa kwabaqalayo esidwelise phambi kwezi khosi ziPhakathi ziya kuba yindawo elungileyo yokuqala.
Ikhosi iqhuba iiveki 4.
Xa ugqibile ukujonga iimvavanyo zezinye iinkampani uya kufundiswa indlela yokubhala uvavanyo lwakho lobuchwephesha usebenzisa isakhelo sovavanyo lweJasmine. Ikhosi ilula Iiveki ezi-2 kunjalo, oko wadalwa Udacity.
Le khosi ibonelelwa yenye yeetekhnoloji ezinkulu kwihlabathi, Uphando, ngokusebenzisa Udacity. Yikhosi eya kukufundisa indlela yokwenza nayiphi na iwebhusayithi ngokuthembekileyo ngokukhawuleza, nokuba yeyomsebenzisi wefowuni okanye umsebenzisi wedesktop.
Ikhosi emfutshane iqhuba nje I1 iveki, kodwa kuya kuba njalo nefuthe yeyakho ukuba ufuna ukuphucula ukusebenza kwewebhusayithi.
phezu 121,000 abafundi sele bebhalisile kwikhosi kwaye kuthatha iiveki 4 ukugqiba. Ibonelelwa yiDyunivesithi yasePennsylvania nge-edx.
Le yenye yezifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa esenziwe yenye iTech Giant, IBM. Uya kufuna ulwazi lwe-frontend kunye nesiphelo sophuhliso lwewebhu ukuze uqonde ngokupheleleyo le khosi.
Okona kubaluleke kakhulu, xa ugqiba le khosi, i-IBM iya kukunika ibheji yesakhono ebonisa ulwazi kunye nobuchule obufumene kwesi sifundo. Ikhosi iqhuba iiveki 2, kwaye ungayigqiba ngesantya sakho.
Yenziwe yenye iDyunivesithi igqwesileyo kwihlabathi, KwiYunivesithi yaseHarvard, ngokusebenzisa edx. Ngapha koko, ithathwe ngabaninzi Izigidi ezili-1 zabafundi kwaye ibaleka iiveki 12.
Le yenye ikhosi eyenziwe yiYunivesithi yaseDuke ngeCoursera. Ngaphezulu Abafundi be251,000 bathathe inxaxheba kuyo, kwaye iyabaleka iiyure 39.
Le khosi iyakwenza ukuba wenze inkqubo yeJava ephucukileyo kunokuba ukhe wayidala ngaphambili. Uya kufunda indlela yokuthatha ithuba lamathala eencwadi asele ekhona, kunye nendlela yokwakha i-GUI (I-Graphic User Interface).
Uya kube uqhuba iiprojekthi ezithile kwesi sifundo, enyanisweni, le khosi ineeprojekthi ezininzi ekufuneka zenziwe, kwaye iveki yokuqala nayo iqala ngenye.
Ndiyakholelwa ngezifundo zasimahla zeJava zabaqalayo ezidweliswe kuqala kwaye ezi zifundo zasimahla zejava zaphakathi, ukulungele ukungena kwihlabathi lobuchwephesha. Ke ngoku siza kudwelisa iikhosi zokugqibela zasimahla ze-java kwi-intanethi kunye nesatifikethi sokugqitywa kwabafundi abaphambili.
Enye yezona zinto zibalulekileyo uya kuqaphela kwezi khosi ze-java zasimahla ze-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa kukuba basebenza ngokukhethekileyo kwindawo ethile, njengenkqubo ye-master.
Le yenye ikhosi ebonelelwa ngu IYunivesithi yasePrinceton, ngeCoursera. Ngaphezulu Abafundi be183,000 sele bebhalisile kuyo, kwaye ithatha ixesha elide iiyure 50 ukugqiba.
Ikhosi iqala ngokukwazisa kwi-Instruction Set Architecture kunye ne-Microcode, emva koko iqhubela phambili ukukufundisa uphononongo lwe-cache kunye nokuninzi kwi-superscalar.
Ewe kunjalo, kuya kufuneka wazi ukuba le khosi inikezelwa yi-IBM, ukusuka kwigama. Yikhosi ekhethekileyo enezinye iikhosi ezi-5 kunye nayo.
Yikhosi ye-intanethi ngokupheleleyo kwaye inokugqityezelwa ngaphakathi iinyanga 4. Yikhosi yokuzenzela, oko kukuthi, ungakhetha ukuyigqiba ngaphantsi okanye ngaphezulu kwezi 4 iinyanga. Eli ikwalithuba lokuba ujonge iposi yethu kwi Isatifiketi sobungcali benzululwazi yedatha ye-IBM ukuba unomdla wokuqalisa umsebenzi kwisayensi yedatha.
Le khosi inikezelwa ngokukodwa yi-Coursera project network. Esi sesinye sezifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa esiyikhosi yeprojekthi.
Oko kukuthi, iyasebenza kakhulu kunethiyori, uya kube ufunda ukungqinisisa uFakelo lweGolang kumatshini wefestile. Kwakhona, uya kufunda ukubhala isikripthi seGolang ukudibanisa kumatshini osefini kunye nezinye izinto ezininzi.
Le khosi imfutshane yobuchwephesha iqhuba ngeyure 1.
Le khosi yeJava ephucukileyo inikezelwa yiRochester Institute of Technology, nge-edx kwaye iqhuba iiveki 8 (iiyure ezili-10-12 ngeveki). Yi le hayi ikhosi self-isantya apho unokugqiba ukuba uqale nini kwaye ugqibezele, umqeqeshi wakho uya kugqiba ukuba kuwe.
Ngoko lungiselela iklasi elungelelanisiweyo apho umqeqeshi ethatha isigqibo kwizinto ezininzi. Ngokuchasene noko, oku akubi kwaphela, kuba abaqeqeshi bakho abangoonjingalwazi kunye nabahlohli abaphezulu kukhuseleko lwekhompyuter baya kukunceda ukuba ube nzulu kwaye ngokufanelekileyo gqiba ikhosi.
Le yenye yezifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa eziququzelelwa yiDyunivesithi yaseToronto nge-edx. Uyakwaziswa kuninzi lwe-algorithms yokufunda koomatshini be-quantum.
Ngaphaya koko, uya kuba nakho ukufikelela kulindelo lwezixhobo zequantum kwizikali zamaxesha ahlukeneyo, kunye nokunye. Ikhosi iqikelelwa ukuba igqitywe ngaphakathi iiveki 8 kwaye yikhosi oziqhubayo onokuthi uyiqale kwaye uyigqibe nanini na ufuna.
Ngolwazi lwakho olusisiseko kunye noluPhakathi lweNkqubo yeJava, unokuntywila kule khosi ikhethekileyo yobuchwephesha ukuze ufunde i-digital forensics. Le khosi iya kukufundisa iindlela zokwenza uphando lobuchwephesha bedijithali ukuze ufumane idatha enxulumene nolwaphulo-mthetho lwe-cyber.
Yenye ikhosi eyadalwa yiRochester Institute of Technology ngeedx. Iqhuba iiveki ezisi-8 kwaye isantya sayo simiselwa ngumhlohli wakho, uYin Pan, unjingalwazi wokhuseleko lwekhompyutha e-RIT.
Esi sesinye sezifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa ezibonelelwa nguGoogle nge-Udacity. Ngokwenyani, yikhosi yesibini ebonelelwa nguGoogle ukuba songeza kolu luhlu.
Ikhosi imalunga nokukufundisa indlela yokwenza usetyenziso oluthembeke ngakumbi ngokusetyenziswa kwe-automation. Uza kuqala kuqala ngokufunda okuninzi malunga neGradle kwaye iqhubela phambili ukukufundisa izihloko eziphambili ze-android.
Uya kufunda okuninzi malunga nenkqubo ye-Android kule khosi. Kwaye, iyabaleka iiveki 6 kwaye iyazenzela.
Le yikhosi yesithathu esongeze kuloluhlu oluveliswa nguGoogle nge-Udacity. Umsebenzi weAsynchronous uya kufundiswa kuwe ngendlela elula onokuthi uyiqonde.
Le yenye yezifundo zasimahla ze-java ezikwi-intanethi ezinesatifikethi sokugqitywa esiya kukufundisa ukwakha i-60 FPS (iiFramu ngeSibini) iiApps zeWebhu. Le khosi yenziwe kwakhona nguGoogle (Google kwakhona?) ngokusebenzisa i-Udacity.
Kwesi sifundo, uya kufunda ukwenza usetyenziso olusebenza ngcono kakhulu. UPaul Lewis uya kukunceda wenze i-app ekhawulezayo njenge-60 Frames ngeSibini.
Uya kunikwa izixhobo ezithile zokuchonga oonobangela abakhulu beJank. Ikhosi iqhuba ngenyanga 1 kwaye inokuqukunjelwa ngesantya sakho.
Ikhosi iqhuba iiveki 4 kwaye ikwisantya sakho.
Sidwelisile Izifundo ezingama-30 zasimahla kwi-intanethi zejava ezinesatifikethi sokugqitywa ukuba ungaqala ukufunda ASAP.
Okokuqala, Ezinye zezi zifundo ziya kukunceda wenze usetyenziso oluphathwayo, oluyindlela elungileyo yokuqala.
Okwesibini, unokwakha usetyenziso lwelifu
Okwesithathu, izicelo zewebhu, kunye nezinye ezininzi
Kuxhomekeke, kwinqanaba lokuqala, kulula ukufunda. Kodwa, njengoko ixesha lihamba liya liqina (oko akuthethi ukuba akunakwenzeka ukusuka kwisiqalo ukuya kwindawo ephakathi kunye nengcali).
Njengoko ilizwi elidumileyo lihamba, "ukuba ungayenza, ndingayenza."
Kuxhomekeke kwisantya sakho kunye nekhosi oyifundisayo. Ezinye iikhosi zithatha ixesha elifutshane njengeeyure ezimbalwa ngelixa ezinye zithatha ixesha elide njengeenyanga ezi-6.
Kukho izatifikethi ezisezantsi njenge $20 kwaye ezinye ziphezulu njenge $100.
Xa ugqibile ikhosi kwaye uphumelele uvavanyo olufunekayo, uya kunikwa ukufikelela kwisiqinisekiso.
Izifundo ezili-10 eziGqwesileyo zoMphuhlisi kwi-Intanethi
Ezona ndawo zibalaseleyo zokuFundisela kwelinye ilizwe zaBafundi beSayensi yeKhompyutha
Iikhosi ze-Intanethi Funda iSakhono kwi-Intanethi izifundo zekhompyutha funda kwi-intanethi
Post Previous:Izifundo ezili-10 eziBalaseleyo zaSimahla zobuNkokheli kwi-Intanethi ezineSatifikethi
Okulandelayo Post:Aba-5 abaPhezulu be-Internship yasimahla kwi-Intanethi ngeSatifikethi